Tiro xildhibaano Yuhuud ah oo Ilhan Cumar ugu baaqay inay “cadeyso ereyadeeda”, iyadoo wakiilka Minnesota oo si kulul u weeraray xildhibaanadan. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Tiro xildhibaano Yuhuud ah oo Ilhan Cumar ugu baaqay inay “cadeyso...
Tiro xildhibaano Yuhuud ah oo Ilhan Cumar ugu baaqay inay “cadeyso ereyadeeda”, iyadoo wakiilka Minnesota oo si kulul u weeraray xildhibaanadan.
Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Congreska Mareykanka ayaa waxay jawaab kulul oo naadir ah siiyay xubnaha ay ka wada tirsan yihiin xisbiga Dimuqraadiga ka dib hadal horey uga soo yeeray oo ay Mareykanka iyo Israa’iil la barbar dhigtay kooxaha Taliban iyo Xamas.
Tiro xildhibaano Yuhuud ah ayaa Ilhan Cumar ugu baaqay inay “cadeyso ereyadeeda”, iyadoo wakiilka Minnesota ayaa si kulul u weeraray xildhibaanadan.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay dhalleeceyn Ms Omar u jeediso Israel ay khilaaf ka dhex abuurto xubnaha xisbigeeda.
Sannadkii 2019-kii, waxay raalli-galin ka bixisay hadal ay sheegtay oo ahaa in ay lacag ay sabab u tahay taageerada Israa’iil.
Maalintii Isniinta, Ms Omar waxay barteeda Twitterka ku soo qortay “waxaan aragnay gumaadka aan la malayn karin ee ay gaysteen Mareykanka, Xamaas, Israel, Afghanistan, iyo Taliban”.
“Waa inaan u helnaa isla xisaabtan iyo cadaalad dhammaan dhibanayaasha xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha,” ayay qortay, xilli ay su’aalo waydiinaysa Xoghayaha Arimaha Dibada Anthony Blinken intii lagu guda jiray dhageysiga gudiga Aqalka Wakiilada.
Khilaafka ayaa imanaya todobaadyo uun kadib markii dagaalkii u dhaxeeyay Xamas iyo Israa’iil lagu soo afjaray xabad joojin iyadoo ay isa soo tarayaan wararka ku saabsan weerarada neceyb ee ka dhanka ah Yuhuuda Mareykanka.
Balse hadalkii xildhibaan ilhaan Cumar oo kahadashay kooxaha Islaamiyiinta xagjirka ah ee Xamaas iyo Taalibaan ayna la barar dhigtay oo ay hal jumlo ay kula xusto Mareykanak iyo Israa’iil ayaa waxay khilaaf ka dhex dhalisay xubnaha xisbigeeda.
“in ay la barbardhigto Mareykanka iyo Israel Xamaas iyo Taalibaan waa hadal gef ah oo aan loo meel dayin” ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen xubno uu hogaaminayo Jerry Nadler oo ka tirsan Dimuquraadiga lagana soo doorto New York.
“in la iska indhatiro farqiga u dhexeeya dimuqraadiyada ku dhisan sharciga iyo ururada aanan sumacdda lahayn kuna lug leh falal argagixisanimada uma wanaagsan sumcadda qofka u doodaya waaan mid muujinaysa dhexdhexaadnimo la’aan qota dheer” ayay intaa ku dareen xubnahani.
“Waxyaabaha la midka ah ee been abuurka ah ayaa waxaa uu gabbaad siinayaa kooxaha argagixisada,” ayay sii raaciyeen.
Horraantii Khamiista, Ms Omar – oo asalkeedu soomaali yahay islsmarkana qaxootinimo horey ugu soo gashay Mareykanka kana mid ah Muslimiintii ugu horeeyay ee loo doorto Koongaraska – ayaa jawaab kulul siisay xubnahani oo ay ku tilmaamtay “kuwa aan xishoon” iyada oo ku eedeysay inay ku kaceen”falal Islaam naceyb ah”.
“Waa wax laga xishoodo asxaabteyda i soo wacda markay u baahdaan taageeradeyda inay hada soo saaraan qoraal ay ku codsanayaan ‘caddeyn’ iyaga oo I soo wacin,” ayay ku soo qortay Twitter-keeda.
Previous articleSafiirka Mareykanka ee QM oo sheegtay in lagaaray xiligii xukuumada Ethiopia lagula xisaabtami lahaa Xasuuqii Gobolka Tigreey.
Next articleWax ka Baro aflaamta ay daawadaan siyaasiinta caanka ah iyo Filimada ay ugu jecel yihiin siyaasiyiinta caanka aka ah caalamka. .
Xisbiyada isbahaysiga mucaaradka Somaliland ee Waddani iyo Ucid oo shaaciyay magacyada musharaxiinta ay u dhisayaan guddoonka Golaha Wakiillada Somaliland.
Abiy Ahmed oo doorashadii shalay waddankaasi ka dhacday ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble oo madaxda maamul goboleedyada ku marti-qaadayo inay kasoo qaybgalaan shir ka dhacaya magaalada Muqdisho
Gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo oo Dowladdda ku eedeeyay inay muddo 9 bilood ah ku xayireen Muqdisho.
Madaxda kooda Barcelona oo Rajo ka qaba in ay soo iibsadaan Christian Ronaldo Xili uu u cayaaro Messi
Madaxweynaha Turkey oo sheegay in Turkey iyo Mareykanka ay gelayaan waa cusub oo wanaagsan
Madaxweyneyaasha Maamul Goboleedyada oo lagu wado in ay muqdisho soo gaaraan...
Mohamed Abdullahi Mohamed - February 19, 2021 0
Waxaa Magaalada Muqdisho lagu wadaa in ay soo gaaraan Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada, kadib shir uu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha maamulka Koofur...
Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Puntland oo dirtay baaq ku saabsan in gargaar...
Warkii Xalay ee sirta ahaa ee Madaxweyne Dani oo hoos u...
Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu oo ku Hanjabay in ay...
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo shaacisay dad garaya 1,671 qof, laga baaray...
Dhakhtar ku sugan magaalada Sacramento ee gobolka California oo dacwad la...
Xisbiyada isbahaysiga mucaaradka Somaliland ee Waddani iyo Ucid oo shaaciyay...
Mohamed Abdullahi Mohamed - June 22, 2021 0
Abiy Ahmed oo doorashadii shalay waddankaasi ka dhacday ku tilmaamay...
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble oo madaxda maamul goboleedyada ku marti-qaadayo...
Gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo oo Dowladdda ku eedeeyay inay muddo...
Madaxda kooda Barcelona oo Rajo ka qaba in ay soo iibsadaan...
Dowlad gobolleedka Puntland oo ciidamo booliis ah oo hor-leh geysay...